Ukukhetha uhlobo oluchanekileyo lweProjekthi yoyilo loMzobo | Izidalwa ezikwi-Intanethi
Ukukhetha ifonti efanelekileyo kwiprojekthi
Njengoko ibalulekile ifomathi, imibala njenge typography kwimisebenzi yoyilo. Kwaye njengoko sonke sisazi ngoku, sebenzisa typography ahlekisayo ayiphumeleli kakhulu. Kuxhomekeke kwimodeli yomsebenzi obalekayo, enye okanye enye iya kuphumelela ngakumbi. Oku kungenxa yomfanekiso esifuna ukuwunika uphawu esimele ngalo.
Uhlobo lohlobo lokutya olukhawulezayo aluyi kufana Ngaphandle kwenkampani yeenqwelo moya. Abanye baya kuba namandla, abanye babe namandla okanye kuya kufuneka babe njalo Italic okanye endaweni yoko nocwangco ngakumbi. Siza kunika apha ezinye zeengcebiso ezilungileyo zokukhetha iifonti efanelekileyo yeeprojekthi ezahlukeneyo esinazo.
2 Cinga ngokusebenza
3 Vavanya ngokuqatha
4 Ulwalathiso olubonakalayo kunye neethoni
5 Uhlobo lohlobo olusingqongileyo
Njengoko besitshilo kwintshayelelo umntu ngamnye uya kuba nayo ubuntu obahlukileyo. UGoogle uya kufuna ukwahlula kwiCoca-Cola, ngokuthanda Izidalwa ezikwi-Intanethi uyakuyenza ukusuka IPhone iindaba.
Ngaphambi kokuqala iprojekthi, masicinge ngamaxabiso kunye namagama achaza imvakalelo wento esifuna ukuyenza. Umzekelo, ngaba uyilo luya kuba luhlobo, luhlakaniphile, okanye lukhuselekile? Ijolise kuzo zonke iintlobo zoluntu okanye enye? Zinciphise kwiimpawu ezintathu ukuze ufumane umbono ocacileyo isikhokelo apho umthombo wakho uya kuba khona. Ifonti yobuhlobo inokujikeleza kwaye ifundeke ngokwenene. I-inshurensi inokubakho emboxo.
Kuhlala kufanelekile ukuqinisekisa ukuba ifonti ekhethiweyo ikhuselekile yewebhu kwaye inokunikezelwa ngokugqibeleleyo kwisikhangeli. Ukuba usebenzisa ilayibrari yefonti elungileyo okanye ifayile yefonti ekhuselekileyo kwiwebhu (OTF), ifonti yethu kufuneka ikhuseleke kwinethiwekhi.
Into yesibini ekufuneka uyiqwalasele apha kukusebenza. Sebenzisa ilayibrari efana neFonti kaGoogle okanye iAdobe Typekit iqinisekisa ukuba yonke into ilungisiwe kwaye ungalindela ukusebenza ngokukuko. Xa uyikhuphela kwifayile ye- ifonti yewebhu Qiniseka ukuba ibandakanya bonke oonobumba onokufuna kubo kwilixa elizayo. Ukuba uzikhawulela koonobumba kunye neenombolo kuphela, unokufuna ukwenza isimangalo okanye izinto ezahlukeneyo ezingekhoyo kwiphakheji yomgca.
Soloko uvavanya uhlobo lwakho kwiifom ezifanelekileyo kwiprojekthi. Awazi ukuba uhlobo lohlobo lokuchwetheza luya kusebenza ude ulubone kubungakanani obuchanekileyo kwaye ukuba isithuba siyasebenza na. Udinga umbono wokwenyani wokuba uza kujongeka kanjani, ongasayi kufumana kwiLatin engeyiyo.
Ulwalathiso olubonakalayo kunye neethoni
Ulwalathiso olubonakalayo ubukhulu becala yifonti kunye nendlela ejongeka ngayo, ngelixa itoni ilungiselelo lamagama ukwenza umyalezo. Zombini ezi zinto kufuneka zihambelane kwaye zivumelane. Masisebenzise amaxabiso esigqibe ngawo ngaphambili, ukuqonda ukuba uthini kanye kanye umthombo kwaye ujongeka njani umyalezo xa uwuthelekisa noko kubhaliweyo. Ifonti echanekileyo inokuwandisa amagama ngale ndlela, yiyo loo nto iimpawu ezibonakalayo kwifonti zibalulekile kulwalamano olusebenzayo.
Ezinye zeempawu ekufuneka zithathelwe ingqalelo bubunzima, ukujikeleza, ubude, kunye nendlela yefonti ehamba ukusuka kwileta ukuya kwileta. Banokuqhekeka phakathi kwe-serif, i-sans-serif, idash, okanye izitayile ezitsalwe ngesandla. Ubuntu bomntu ngamnye buya kunceda ekuvuseleleni imvakalelo okanye umyalezo.
Uhlobo lohlobo olusingqongileyo
Ukuchwetheza kuyo yonke indawo. Okukhona uqala ukuyiphawula kukujikelezile, kwaye uthathe isigqibo ngento oyenzayo nongayithandiyo, izigqibo zobulumko onokuzenza xa ukhetha ifonti. Njengoyilo okanye i-hobbyist, kuya kufuneka uqaphele uhlobo lohlobo olukujikelezileyo ngalo lonke ixesha. Ayinakuba yinto esengqondweni yethu kuphela xa siyifuna ngokwenene. Kuya kufuneka sibone okusingqongileyo njengesizathu sokuphumelela kwiprojekthi yethu.
Landela #hasthags kwimidiya yoluntu, funda iiblogi malunga neefonti, ndwendwela ezahlukeneyo Iifonti zewebhu kwaye ugcine amehlo akho exobukile xa uphuma phandle. Thelekisa umsebenzi olungileyo wabanye kunye nabanye ababi, Thatha imifanekiso kwaye uthethe nabahlobo ngokuthelekisa ukusilela kunye nempumelelo. Okukhona sikuphawula okokuqala, kokukhona siya kuyazi kamva xa kusiziwa kuyilo.
Umendo opheleleyo kwinqaku: Ukudala kwi-intanethi » ngokubanzi » Ukukhetha ifonti efanelekileyo kwiprojekthi
Unikelo olukhethekileyo: gcina i-60% kule mega pack yemixholo yeWordPress kwiVisualmodo